မေးခွန်းနှင့်အဖြေ | November 2019
ပင်ပန်းမျက်စိရှောင်ရှားရန်သင့် Monitor ကိုထိန်းညှိဖို့ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်ရသောအခါသင်ပင်ပန်းမျက်စိရနေလျှင် - ကဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည် - ကသင့်ရဲ့မော်နီတာတွေအတွက်အကောင်းဆုံး setting များကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး (ကျနော့်ကိုဤဆောင်းပါးတွင်နှင့်အတူဤနေရာတွင်ဖတ်ပါအကြံပြု: https://pcpro100.info/ustayut-glaza-pri-rabote- za-pc /) ။ သင်တဦးတည်းမော်နီတာအဘို့ဖြစ်သည်အနည်းအဘို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်နေကြပါလျှင်ထိုမှတပါး, ငါသညျဤအသိပေးစာအများကြီးစဉ်းစား: သူတို့ထဲကတဦးတည်းနာရီ run နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဘို့နှင့်အခြားတစ်ဝက်ပြီးနောက်တစ်နာရီ - သင်ကပစ်ရန်နှင့်သူ၏မျက်စိငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်အချိန်ရဲ့ခံစားရ?
မင်္ဂလာပါ ဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ယနေ့တွင် Third-party အစီအစဉ်များကိုသုံးစွဲဖို့မှာအားလုံးမလိုအပ်ပါဘူး (ခေတ်သစ် OS ကို Windows တွင် 7/8 ကြောင်းနှင့်စပယ်ယာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မဆိုးဖြစ်) ။ သို့သော်မရအမြဲနဲ့အားလုံးမဟုတ်အလုံအလောက်ယင်း၏စွမ်းရည်၏။ ကောင်းပြီဥပမာ, သငျသညျလျင်မြန်စွာ resolution ကိုဓါတ်ပုံတွေကပြောင်းလဲနိုင်သည်, သို့မဟုတ်တစ်ချိန်တည်းမှာ image ကိုအပေါငျးတို့သဂုဏ်သတ္တိများရှုမြင်, အနားကိုချုံ့, extension ကိုပြောင်းလို့ရပါသလား
Photoshop မှာ shortcuts: ပေါင်းစပ်နှင့်ချိန်း
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပိုမြန်ကွန်ပျူတာထင်သောအခါ, လက်ချောင်းများနှင့်မှတ်ဉာဏ်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကိုမှ Photoshop ကိုပူသော့ကိုလေ့လာပါနှင့်မှတ်မိလျှပ်စီးမြန်နှုန်းမှာဤလောကသို့ကြွလာ။ မာတိကာအသုံးဝင်သော Photoshop ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာခလုတ်စားပွဲတင်: ပေါင်းစပ်၏သတ်မှတ်ရေးအစီအစဉ်တွင် keyboard shortcuts တွေကိုအခန်းကဏ္ဍဦးဆောင်အများအပြားမှော်ပေါင်းစပ်အတွက် Photoshop ကိုအသုံးဝင်သော Photoshop ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာ button ကိုဒီတူညီတဲ့ product key ခြင်းဖြင့်ကစားနေသည် Create - Ctrl + ။
အဆိုပါဖွင့်လှစ် fb2? သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် e-book ဖတ်ရှုဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Ave! ဖြစ်ကောင်းအများစုအသုံးပြုသူများအတွက်ကပိုက်ကွန်အပေါ် e-book ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်မရှိလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ထဲကတချို့က txt ပုံစံ (ကွဲပြားခြားနားသောစာသားကိုအယ်ဒီတာများကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်ရန်), pdf အချို့ (စာအုပ်တွေကို၏လူကြိုက်အများဆုံးကို formats ၏တဦးတည်း, သင် pdf ကိုဖွင့်) တွင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ fb2 - နည်းလူကြိုက်များ format နဲ့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ e-book ရှိပါတယ်။
Built-in card ကိုစာဖတ်သူ LA က-3HD53 ကွန်ပျူတာ display ကိုအတွက်ကပ်ရန်စဲ
မင်္ဂလာပါ ငါက Windows7(Home Premium) နှင့်အတူတစ်ဦးက desktop ကွန်ပျူတာရှိသည်။ ဒါဟာစာဖတ်သူအမျိုးမျိုးသောကဒ်ပြားငါး slot နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါဟာမရှိတော့ပိုင်းတွင်ကြောင့်ပြဿနာတွေမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်နှစ်ခုကတ်များတဖြည့်စွက်ခဲ့ကြပြသသောအချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်သင်သာတစ်ကဒ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်သည်ထိုကဲ့သို့သော option ကိုကုန်ကျပေမယ့်, ထို့နောက်မှာအားလုံးကဒ်များတဦးပေါ်လာဖို့စဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး gif animation ကိုဖနျတီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? gif animation များကိုဖန်တီးပေးဖို့အစီအစဉ်ကို
အားလုံးဧည့်သည်များမှနှုတ်ခွန်းဆက်! ဖြစ်ကောင်း, အင်တာနက်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူကိုပြောင်းလဲရန် (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးကဗီဒီယိုဖိုင်အဖြစ်ကစား) ထိုပုံရိပ်တွေနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့သောပုံရိပ်တွေကာတွန်းဟုခေါ်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ချုံ့ပုံရိပ်ကိုဘောင်တနည်း (ကအချို့သောအချိန်ကြားကာလနှင့်အတူ) အားဖွင့ ်. နေသောအတွက် gif ဖိုင်ဖြစ်ကြသည်။
ဝှက်ထားသောဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲကြည့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ACDSee, စုစုပေါင်းတပ်မှူး, Window Explorer ကို။
နေ့သည်ကောင်းသော။ drive ကိုတွင်, "သာမန်" file ကိုအပြင်လည်း (Windows ကို developer များ၏စိတ်ကူးပေါ်) ရှိဝှက်ထား system files ကိုဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများမမြင်ရတဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်တို့သည်ဤဖိုင်များကိုတို့တွင်အမိန့် restore လုပ်ဖို့, သင်ပထမဦးဆုံးကသူတို့ကိုကြည့်ရှုရမည်ဟုလုပ်ပေးချင်တယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မည်သည့်ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေဟာဂုဏ်သတ္တိများအတွက်သင့်လျော်တဲ့ attribute တွေ setting အားဖြင့်ဝှက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကဆွဲထားတဲ့ပိတ်မပါဘူးဆိုရင် program ကိုပိတ်လိုက်ဖို့ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဒါကသင်အစီအစဉ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်, သငျသညျအလုပ်မလုပ်လမ်းကိုဖွင့်ပါ, အဲဒီနောက်သူကခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းတုံ့ပြန်ရပ် (နှင့်မကြာခဏပင်အထဲတွင်သင်၏အလုပ်မကယ်မပါဘူး) ။ program တစ်ခုကိုပိတ်လိုက်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါထိုမှတပါး, - မကြာခဏဘာမျှမကပဲ command များကိုတုံ့ပြန်ပါဘူး, သောဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်ပျက် (မကြာခဏဤအအချိန်လေးတွင်, cursor ဗီဒီယိုတစ်ကားကို "hourglass" သို့လှည့်) ... ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အတော်ကြာ options များဆွေးနွေးကြမည် တစ်ဦးအေးခဲ application ကိုပိတ်ဖို့ရန်။
ဖုန်မှုန့်နှင့်အစွန်းအထင်းကနေ Monitor ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တိုက်ခန်း (အခန်းတစ်ခန်း) တွင်သက်သက်သာမဟုတ်ခဲ့လျှင်အဖြစ်တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုလည်းမရှိရာ, အချိန်နှင့်တကွ, မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ဖုန်မှုန့်နှင့် (ထိုကဲ့သို့သောဖက်တီးလက်ချောင်းများ၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းကဲ့သို့) အစွန်းအထင်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ဤ "ရွှံ့" ဟုမော်နီတာ၏အသွင်အပြင် (ကပိတ်ထားအထူးသဖြင့်အခါ) spoils, ဒါပေမယ့်လည်းပေါ်လျှင်ပေါ်ပုံကြည့်ရှုကာကွယ်ပေးသည်နေသည်သာ။
Windows Registry ကို Editor ကိုဖွင့်နည်း
နေ့သည်ကောင်းသော။ Registry ကို - ဤအထူးသဖြင့်ဘယ်မှာ Windows ကိုစတိုးဆိုင်တစ်ဖွဲ့လုံးကစနစ်၏အပေါငျးတို့သ setting များကိုတွေနဲ့ parameters များနှင့်တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အညီ, အတော်လေးမကြာခဏအမှားများ, ပျက်ကျ, ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှု၏အမှု၌, Window tweaking နှင့်အကောင်းဆုံးကဒီတူညီတဲ့ registry ကိုသို့သွားကြဖို့ရှိပါတယ်။ မိမိအဆောင်းပါးတွေမှာ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် (ယခုသင်ဤဆောင်းပါး :) ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်) ဌာနခွဲသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုဖျက်, registry ကိုအတွက်မဆို parameter သည်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းရေးပြီ ... ဒီအကူအညီနဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ငါသည်သင်တို့ကိုအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေပေးချင် Windows ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များ 7, 8, 10 အတွက် Registry Editor ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ဘယ်လို။
အသစ်က console ကိုမော်နီတာ (ဥပမာ, Dendi, Sega, Sony က PS) မှအဟောင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
မင်္ဂလာပါ အဟောင်းကိုနေ့ရက်ကာလအဘို့လွမ်းဆွတ်မှု - ခိုင်မာတဲ့ feeling နဲ့တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး။ ငါ consoles စ Dendi, Sega အတွက်မကစားဘူးသောသူတို့, Sony က PS 1 နားလည်လို့မရဘူးထင်တယ် (ဒါပေါ်နှင့်။ ) - သူများဂိမ်းများကိုများစွာသောဘုံဖြစ်လာခဲ့သည်, ထိုဂိမ်းများကိုများစွာသော (ယခုအထိဝယ်လိုအားနေသော) အစစ်အမှန် hits ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာယနေ့ကစားရန် - သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ (emulator အပေါ်အထူးဆော့ဗ်ဝဲကို install နိုငျသညျ, ငါကဒီမှာသူတို့ကိုပြောပြသည်: https: // pcpro100 ။
အပူနှင့်လွတ်လပ်သောကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုပယ် - တဲ့ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ဤပြဿနာကိုနွေရာသီအတွက်ဖြစ်ပေါ်သောအခါ, အခန်း၌မြင့်သောအပူချိန်ကိုရှင်းပြရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်မကြာခဏအပူစည်းမျဉ်းနှင့်အတူပြဿနာကိုရာသီပေါ်မူတည်ပါဘူး, ပြီးတော့သူကကွန်ပျူတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပူသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
(USB ကြိုးကနေတစ်ဆင့်) ကွန်ပျူတာသင်၏ဖုန်းနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုဝေမျှဖို့ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော! ငါကတစ်ဦးကို PC မှသင့်ရဲ့ဖုန်းနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုမျှဝေပေးရန်လိုအပ်သောအခါလူတိုင်းနီးပါး, ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ထင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအမှားရှိပါတယ်ဘယ်သူကိုထံမှဥပမာအားဖြင့်, တစ်ခါတလေကြောင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးလုပ်ဖို့ရှိသည် ... ကိုယ့်ကို Windows-install ကြောင်းဖြစ်ပျက်, နှင့်ကားမောင်းသူကွန်ယက်ကဒ်ကိုအလိုအလျောက် installed နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
မင်္ဂလာပါ မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သတ္တုတွင်းများ၏မိတ်ဆွေကောင်းအဟောင်းဓါတ်ပုံမှတဆင့် သွား. ထိုသူအချို့တို့သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတချို့မရှိကြပေ။ ထိုသူက, စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းမရှိဘဲ, သူသည်ငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်: "သင်ပေမယ့်လူတစ်ဦး၏အသက်အရွယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်ပေါ်မှာနှိပ်နိုင်လျှင်?" ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, သူသည်ဤစိတ်ဝင်စားဘယ်တော့မှခဲ့ပေမယ့်တွေ့သည် ... မေးခွန်းငါ့ထံသို့စိတ်ဝင်စားဖို့သလိုပဲငါသည်လည်းသင်တို့၏ network ပေါ်မှာအချို့သောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်!
Andrey, Hello! ငါက Windows764-bit နဲ့, အခြေခံဗားရှင်း (လိုင်စင်) installed ။ antivirus (လိုင်စင်) Dr.Web လုံခြုံရေး Space ကို 11.5 ။ အင်တာနက်က။ ငါ့ရှေ့မှာပြဿနာ: ကွဲပြားခြားနားသောဖုန်းများနှင့်အတူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်များကို download လုပ်ပါရန်။ ဤဖိုင်များကိုတည်ရှိသည်ဘယ်မှာငါမသိရပါဘူး။ တစ်ကေဘယ်သတင်းစကားကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် "ဟုအဆိုပါ device ကိုများအတွက် software ကိုစတင်တည်ထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ "
နေ့သည်ကောင်းသော။ အန္တရာယ်ကင်းနဲ့ရိုးရိုးမေးခွန်းတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop မှာအလုပ်လုပ်သောအခါငါအများကြီးစဉ်းစား: "သင်မည်သို့ကွန်ပျူတာဤသို့မဟုတ်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများသိလား ... " ။ ထိုအခါငါဤမေးခွန်းကိုများသောအားဖြင့်အောက်ပါကိစ္စများတွင်, အတော်လေးမကြာခဏပေါ်ပေါက်သောသင်ကိုပြောပြရမယ်: - ယာဉ်မောင်းရှာဖွေနေနှင့်ကို update တဲ့အခါမှာ (https: // pcpro100 ။
လက်ပ်တော့ / ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ဖို့က Windows ၏အဘယျဗားရှင်း
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါ၏အဆောင်းပါးများကို၏နောက်ဆုံးအနည်းငယ် Word နဲ့ Excel ၏သင်ခန်းစာများမှမြှုပ်နှံခဲ့ကြပေမယ့်ဒီအချိန်ငါအမည်ရသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုများအတွက် Windows ဗားရှင်း၏ရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ပြောပြရန်, အခြားဦးတည်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ဒါဟာအများအပြားအရင်ကဆိုရင် (နှင့်အရင်ကဆိုရင်သာ) ထွက်လှည့်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်စရာ (Windows 7, 8, 8 ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
မြန်နှုန်း Download: Mbit / s နှင့် MB / s, ဒါပေမယ့် megabits megabyte အတွက်
ကောင်းသောနာရီ! ငါကြားရပြီအားလုံးနီးပါး / s နဲ့ 50-100 Mbit တစ်မြန်နှုန်းမှာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်သစ်ကိုအသုံးပြုသူသူတို့ download speed အမြန်နှုန်းကိုမြင်သောအခါအကြမ်းဖက်ဒေါသရန်စတင်ဆို torrent client ကိုအတွက် Mbata / s ကိုအနည်းငယ်ထက်မပို (ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ: "အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော၏နှုန်းမှာ ဒါကြောင့်အပေါ် "အနိမ့်အမွနျနှုနျး, ဆင်းရဲသောကွန်ယက်ကို ... " ကြော်ငြာထဲမှာ ... "" ကျနော်တို့က ... လမ်းလွဲခဲ့ကြ "ကြောင်း, ဖော်ပြထားသည်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါအများကြီးအသုံးပြုသူများသည်မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေမျှမျှတတလေးနက်စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်စုစာအုပ်မူတည်ကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပါ။ ပို RAM ကို - ဒါကြောင့်, သင်တန်း, ပိုကောင်း! ဒါပေမယ့် memory ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နှင့်ဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် - ... မေးခွန်းတွေတောင်လည်းရှိ၏ဤဆောင်းပါးကို၌ငါလည်ပတ်မှတ်စုစာအုပ်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သူကိုလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအချို့အကြောင်းပြောဆိုချင်တယ်။
ကွန်ပျူတာမော်နီတာပေါ်တွင်ပုံရိပ်၏မှားယွင်းနေ display ကို
ပြဿနာရဲ့အနှစ်သာရကို: အဂိမ်းများကိုအားလုံးကိုတရား, ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာအရာအားလုံး texture ပြတ်သားဖြစ်လာခဲ့သည်နဲ့ကျွန်မပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည်ရုံဘယ်နေရာမှာထဲကယခင်ဂိမ်းထဲကနေဘာမှမပြောင်းခဲ့ဘူးသော်လည်းပုံ, တစ်ဦးမျက်ရည်ဖြစ်လာပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ ယခုပင်လျှင်ရေနွေးငွေ့ / သစ်သား / လေလှိုင်းစီး / Net က PC ကို, အ Nvidia setting များကိုပြောင်းလဲချိန်ညှိချက်များ (ဒေါင်လိုက်ထပ်တူ, သုံးဆကြားခံ)-install, (အသစ်ဒုက္ခအတွက်စဉ်းစား) အ Nvidia မှာအဟောင်းသစ်သားခါ, အမော်နီတာဗီဒီယိုကဒ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။